Sonos Waxay Diyaarineysaa Inay Ku Bilawdo Gudoomiyaha La Qaadan Karo Bluetooth iyo AirPlay 2 | Wararka IPhone
Waad ogtahay waxa aan jecel nahay ku hadla sonos. Iyada oo ay taasi jirto, waanu jecel nahay iyaga, taasina waa sababta oo ah isku xidhka ay ku hadlayaan af-hayeennadu waa in lagu xisaabtamo, oo waxay u yeeraan si aan caadi ahayn oo wanaagsan, waxayna ku sii fiicnaadaan haddii aan haysanno wax ka badan hal oo aan ku raaxeysanno howlaha qolka badan ee oggolaanaya anaga oo ku raaxeysaneyna muusikadeena qolalka oo dhan.
Si hufan maanta ayaanu kuu keenaynaa war laxiriira Sonos, waxayna umuuqataa in todobaadkan kooxda Sonos ay casuumaad u direen saxaafada teknolojiyada munaasabad ay kusoo bandhigi doonaan qalab cusub. Maxay rabaan inay naga yaabaan? Hagaag, wax walba waxay muujinayaan in waxa xiga ee aan ka aragno wiilasha Sonos, ka dib imaatinkooda sariirta Ikea, ay noqon doonto afhayeen cusub oo la qaadan karo oo wata Bluetooth iyo AirPlay 2. Boodka ka dib waxaan kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan bilaabista.
Haa imaatinka Bluetooth ee Sonos waa muhiim, ilaa iyo maanta waxay isku dayeen inay ka fogaadaan iyaga oo ku manaafacaadsanaya faa iidooyinka ay leedahay gudbinta maqalka ee Wi-Fi, laakiin waa run oo suuqu markasta wuu dalbadaa waana mararka qaar inaan isku aragno baahidaas nasiib darrose taasi may ahayn suurtagal maaha Sonos. Afahankan cusub ee Sonos in sidoo kale waa la qaadi karaa yeelan doonaan Taageerada maqalka ee Bluetooth iyo Wi-Fi oo leh AirPlay 2. Halkan waxaan idinkaga tagnay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida uu u ekaan doono af-hayeenkan cusub ee Sonos Bluetooth:
Qofka ku hadla wuu ka weyn yahay sida ka muuqata sawirka. Si aad fikrad uga hesho cabirkeeda, way ka dheertahay waxyarna way ka weyntahay Sonos One / Play: 1.
Waxay taageertaa amarrada codka ee gacmaha-bilaashka ah ee ka socda Amazon Alexa ama Kaaliyaha Google.
Hadalka Sonos ee la qaadi karo waxaa lagu soo oogay saldhig saldhig (ma garanayno awooda baterigiisa). Markaad ka fogaato qaybta aasaasiga ah, sidoo kale waxaa lagu buuxin karaa iyada oo loo marayo USB-C. Haddii aad ku qaadato safar, qasab maaha inaad u baahan tahay inaad saldhigga keento.
Waxay leedahay gacan isku dhafan xagga dambe ee gaadiidka si fudud. Waa qayb ka mid ah naqshadda aasaasiga ah ee aaladda, ma aha qalab ama nooc suunka ah.
Dhabarka gadaashiisna waxaa kuyaala badhan kala wareegaya hababka Bluetooth iyo Wi-Fi (standard Sonos).
Markaad ku jirto qaabka Bluetooth, qofka ku hadla lama xakameyn karo barnaamijka Sonos. Waxay u dhaqantaa sida ku hadla kasta oo kale oo Bluetooth ah. Qalab ayaad isku xidhataa oo waad dhamaysay.
Amarada codka gacanta-bilaashka ah ee Alexa iyo Kaaliyaha Google sidoo kale lama heli karo (hadda) qaabka Bluetooth.
Qaabka caadiga ah ee Wi-Fi, afhayeenku wuxuu umuuqdaa sida aaladaha kale ee Sonos ee kujira barnaamijka, laakiin wuxuu kujiraa tilmaame batteri ah.
Sida Sonos kale dhawaanahan kuhadla, Sonos kuhadalka sameeyaha wuxuu taageeri doonaa Apple's AirPlay 2.
Intaas oo kaliyana ma aha, sidaad ogtahay, dadka ku hadla Sonos waxay adeegsan karaan barnaamijka Sonos ee aan ku rakibnay iPhone-keena si loo simo codka sameecadaha iyadoo loo eegayo cabirka iyo astaamaha qolka uu ku yaalo. A isu dhigma in Sonoskan cusub ee leh Bluetooth lagu sameyn karo qalab la'aan mahadsanid makarafoonnada kaas oo ku daraya afhayeenka si loogu adeegsado kaaliyeyaasha dalwaddii, waxaan ku soconnaa qaabka AppleP HomePod. Waxaan sugeynaa sii deynta waxaanan ku siin doonaa macluumaad dheeri ah isla marka la soo saaro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Sonos wuxuu isu diyaarinayaa inuu soo saaro afhayeen la qaadan karo oo leh Bluetooth iyo AirPlay 2